हिन्दू धर्ममा शंखलाई निक्कै नै पवित्र र शुभ मानिन्छ । वरिपरीको वातावरण सफा र शुद्ध राख्न मद्दत गर्छ । त्यसै कारण पूजा पाठको आरम्भ गर्दा पहिला शंख बजाईन्छ । धार्मिक मान्यता यो छ कि शंख बजाएर कार्य गर्दा राम्रो...
स्वास्थ्यका हिसावमा प्याज खानु निकै फाइदाजनक छ । यसका केही फाइदा यसप्रकार छन् । प्याजलाई सलादका रूपमा खान सकिन्छ । यसको रस पिउँदा लुबाट जोगिन सकिन्छ । पिसाब रोकिने समस्या भएकाहरूले प्याजको रस पिउनु लाभदायक हुन्छ । नियमित प्याज...
भनिन्छ, क्रोध मानिसको सबैभन्दा ठूलो शत्रु हो । यसैका कारण कैयन सम्बन्धहरु टुटेका उदाहरण पनि छन् । यसकारण रिसलाई सही समयमै नियन्त्रणमा लिनुस् । रिसले सामाजिक तथा पारिवारिक सम्बन्धमा त असर पर्छ नै, हाम्रो स्वास्थमा पनि नराम्रो प्रभाव पर्छ ।...
विश्वभर कोरोनाभाइरस संक्रमितको संख्या ४ करोड २२ लाख ६९ हजारको हाराहारीमा पुगेको छ । संक्रमितमध्ये सबैभन्दा धेरै अमेरिकामा रहेका छन् । अमेरिकामा हालसम्म ८६ लाख ७८ हजार बढीमा संक्रमण पुष्टि भएको छ । यसैगरी अमेरिकामा पछि भारतमा ७८ लाख १०...
एभोकाडोका फाइदा-तौल नियन्त्रणदेखि रक्तचाप सन्तुलनसम्म
एभोकाडो अर्थात् घ्यूफलमा भिटामिन, क्याल्सियम, आइरन, एन्टी–अक्सीडेन्ट र एन्टी–भाइरल गुणहरू भरपूर हुन्छन् । यसको नियमित सेवनले तौल नियन्त्रणमा रहन्छ र क्यान्सर जस्तो गम्भीर रोग पनि लाग्न पाउँदैन । अनि छालाको सुन्दरता पनि यसले कायम गर्छ । यसका अन्य फाइदा यसप्रकार...
गोयलको भ्रमण र भेटघाटको तरंग : के भन्छन् कूटनीतिक क्षेत्रका जानकार ?
भारतीय गुप्तचर 'रअ' प्रमुख सामन्त गोयलले गरेको नेपाल भ्रमणको चर्चाले नेपाली राजनीतिक वृत्त तरंगित बनेको छ । सीमा विवादका कारण संगीन मोडमा रहेको नेपाल-भारत सम्बन्धको बीचमा गोयलको केही घण्टाको नेपाल बसाईले तरंग फैलाएको हो । रोचक पक्ष त के छ...
आर्मेनिया विरुद्धको युद्धमा अजरबैजानलाई समर्थन गर्दै टर्की, तेस्रो विश्वयुद्धको खतरा..
आर्मेनिया र अजरबैजानबीचको युद्धमा अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको टर्कीले अजरबैजानको पक्षमा सैनिक पठाउन सकिने बताएको छ । मध्य र पश्चिम एसियामा आफ्नो साम्राज्य विस्तार गर्न खोजिरहेको टर्कीले नागोर्नो–काराबाख क्षेत्रमा नियन्त्रणका लागि आर्मेनिया र अजरबैजानबीच भइरहेको लडाइँमा समावेश भएर तेस्रो विश्वयुद्धको जोखिम...
दक्षिण कोरियामा बन्दाकोपीको अभाव भएपछि
दक्षिण कोरियामा बन्दाकोपीको अभाव भएपछि त्यहाँको प्रमुख खानेकुरा किम्ची पाउन मुश्किल पर्न थालेको छ । अगस्ट र सेप्टेम्बर महिनामा कोरियाली प्रायद्वीपमा आँधीतुफान, बाढी र पहिरो आएकाले बन्दाकोपीहरू नष्ट भएका थिए । त्यसपछि बन्दाकोपीको मूल्य ह्वात्तै बढेको छ । यसले गर्दा...
ओबामाले भने – भोट बाइडेनलाई हाल्नुहोस् !
अमेरिकाका पूर्वराष्ट्रपति बाराक ओबामाले बुधवार चुनावी भेलालाई सम्बोधन गर्दै बहालवाला राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पको कठोर आलोचना गरेका छन् । ‘मैले पुनः निर्वाचन लड्दा मसँग गोप्य चिनियाँ बैंक खाता भएको भएको भए के हुन्थ्यो होला ? उनीहरूले मलाई बेइजिङ ब्यारी भन्थे होलान्,’...
कोरोनाको खोप लगाउने व्यक्तिको मृत्यु
अस्ट्राजेनिका र अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयले तयार पारेको कोरोनाभाइरस विरुद्धको खोप दिइएका एक व्यक्तिको ब्राजिलमा मृत्यु भएको छ । ब्राजिलको स्वास्थ्य सेवा विभाग एन्भिसाले तेस्रो चरणको परीक्षणका क्रममा उक्त खोप दिइएका व्यक्तिको मृत्यु भएको जनाएको छ । तर एभिन्साले खोप परीक्षणको कार्य...
स्यानीटाइजर घातक, ६ वर्षीया बालिकाको डढ्यो अनुहार
अमेरिकाको ओहायोमा रहेको टोलीडोमा ६ वर्षीया बालिकाले स्यानिटाइजरसँग खेल्दै गर्दा आगो लागेपछि अनुहार डढेको छ । इजाबेला रीयुमी नामक ती बालिकाको अनुहारमा डढेका दागहरू प्रशस्त छन् । आगो लागेपछि उनलाई तत्कालै अस्पतालतिर कुदाइएको थियो । चिकित्सकहरूले उनको ज्यान बचाए तर...
भुटानमा बितेको २४ घण्टामा थप ४ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । यससँगै भुटानमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या ३३६ पुगेको त्यहाँको स्थास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । हालसम्म भुटानमा संक्रमितमध्ये ३०६ पुगेको छ भने अन्यको उपचार भइरहेको छ ।
राति यसकारण रुन्छन् बच्चा
काठमाडौं - साना बच्चा प्रायः रातको समयमा रोएको सुनिन्छ । बच्चा दिनभर सुतेर राति रुने हुँदा आमाले भने हैरानी भोग्नु परिरहेको हुन्छ । बाहिरी दुनियाँमा आइसकेपछि बच्चाले विभिन्न नयाँ कुराको अनुभव लिइरहेका हुन्छन् । आफ्नो वरिपरी दिनभर केही न केही...
इस्लामावाद, ७ कात्तिक ९राससरपिटिआई० स् पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री नवाज सरिफका विरुद्धमा फेरि अर्को मुद्दा दर्ता गरिने भएको छ । भ्रष्टाचार विरुद्धको अनुसन्धान गर्ने सरकारी निकायले उहाँका विरुद्धमा भ्रष्टाचार सम्बन्धी फेरि अर्को मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी गरेको अधिकारीहरुले जानकारी दिएका छन्...
फ्रान्समा एकै दिनमा ४१ हजार जनाभन्दा बढी व्यक्ति कोरोना संक्रमित भएका बताइएको छ । फ्रान्सको स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिएको जानकारीअनुसार यहाँ गएको २४ घन्टा यता मात्र कम्तीमा पनि ४१ हजार ६२२ जना व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण देखिएको हो । यो संख्या सँगै...
काठमाडौंमा मात्रै संक्रमितको संख्या ५४ हजार नाघ्यो, यस्तो छ उपत्यकाको तथ्यांक
उपत्यकामा बितेको २४ घण्टामा थप २७२० जनामा कोरोनाभाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौंमा मात्रै कोरोना संक्रमितको संख्या ५४ हजार नाघेको छ । मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार काठमाडौंमा संक्रमित ५४ हजार २४५, निको हुनेको संख्या ३३ हजार...
रुसले निर्माण गरिरहेको कोभिड १९ विरुद्धको खोप ‘स्पुतनिक भी’ को परीक्षण भारतमा पनि गरिने भएको भारतीय अधिकारीहरुले जनाएका छन् । यस विषयमा भारतको औषधिसम्बन्धी केन्द्रीय निकाय सेन्ट्रल ड्रग्स् स्टान्डर्ड कन्ट्रोल अर्गनाइजेसन्स्ले अनुमति दिएको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले जानकारी दिएका छन् । भारतका...
लिवियाका दुई प्रतिद्वन्द्वी समूहहरूले संयुक्त राष्ट्रसंघको मध्यस्थतामा पाँच दिनको वार्तापछि शुक्रवार स्थायी युद्धविराम सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् । उनीहरूले यो कदमलाई ऐतिहासिक क्षणको रूपमा उल्लेख गरेका छन् । “लिबियाली जनताका लागि आजको दिन शुभ हो,“ समस्याग्रस्त उत्तरी अफ्रिकी देशका लागि...
कोरोना संक्रमणबाट थप १८ जनाको मृत्यु
५ घण्टा अघि अनलाईन खबर
७ कात्तिक, काठमाडौं । कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण थप १८ जनाको मृत्यु भएको छ । काठमाडौंका ६, भक्तपुरका ५, चितवनका ३, सुनसरीका २, मोरङ र दाङका १/१ जना संक्रमितको मृत्यु भएको सम्बन्धित अस्पताल र प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालयहरुले जनाएका छन्...
अष्ट्रेलियाका आठमध्ये सात राज्य तथा क्षेत्रका नेताहरूले यस बर्षको अन्त्यसम्म महामारीका कारण बन्द घरेलु सीमा खुला गर्ने योजनामा सैद्धान्तिक सहमति गरेको प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसनले बताएका छन् । मोरिसनले शुक्रबार केन्द्रीय मन्त्रीपरिषद्को बैठकको अध्यक्षता गर्दै पश्चिम अस्ट्रेलियाका पिमियर मार्क म्याकगोवानबाहेक स्थानीय...
कोरोना निको हुने देशको सूचीमा भारत अग्रस्थानमा, अमेरिकामा बढ्दै संक्रमित
विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या चार करोड २० लाख नाघेको जोन्स हप्किन्स विश्व विद्यालयले दिएको पछिल्लो अपडेटमा जनाएको छ । उक्त विश्वविद्यालयका अनुसार विश्वभरी चार करोड २० लाख ९४ हजार ५३५ जना कोभिड १९ सङ्क्रमित भएका छन् ।...
पेटका लागि वरदान हो मेवा...
काठमाडौं -मेवा र कागती दुवै स्वास्थ्यका लागि धेरै लाभदायक हुन्छन् । पेटका लागि मेवा वरदान हो किनकि यसमा भिटामिन ए, बी, सी र फाइबर भरपूर हुन्छ । कागती खाँदा पेट, आँखा र छालाको समस्या हुँदैन । यसका अतिरिक्त यसमा फस्फोरस,...
काठमाडौं- दहीले स्वास्थ्यलाई धेरै फाइदा गर्छ । दहीमा भएका रासायनिक पदार्थका कारण यो छिट्टै पच्छ । अपच, कब्जियत र ग्यासको समस्या भएका मानिसलाई दही लाभदायक हुन्छ । तर गलत तरिका वा गलत समयमा दही खाँदा शरीरलाई हानि हुन्छ ।...
काठमाडौं — मानिसले लसुनको खेती गर्न थालेको पाँच हजार वर्ष भइसक्यो । मानव स्वास्थ्यका लागि गुणकारी लसुन खाँदा स्वास्थ्य राम्रो हुन्छ । लसुनको टुुप्पो एकाबिहानै खाँदा धेरैथरी रोगबाट बच्न सकिन्छ । लसुनका विशेषताको अध्ययन गर्दा यो त गजबको एन्टीबायोटिक हो भन्ने पत्ता...